တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ တစ်ရာနှုန်းအထိ ပြေးဆွဲနိုင်မည့် မြင်းကောင်ရေ ၂ဝဝဝ စက်ခေါင်းသစ်များကို တရ? - Yangon Media Group
တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ တစ်ရာနှုန်းအထိ ပြေးဆွဲနိုင်မည့် မြင်းကောင်ရေ ၂ဝဝဝ စက်ခေါင်းသစ်များကို တရ?
by M Bwe
အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်များကို စံသတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီသူများကိုသာ ထုတ်ပေးမည်
ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးအား နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုဖြင့်အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် ချမှတ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက် ရေးဆွဲထားသည့် မြေပုံကို မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီထံလွှဲအပ်ပေးမည်
တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု မြန်မာကုန်သည်၊ တောင်သူများထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေရန် နယ်စပ်ကုန်စည်ဒိုင်များကို နိုင်ငံအတွင်းဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ
တစ်နာရီ ကီလိုမီတာတစ်ရာနှုန်းအထိ ပြေးဆွဲနိုင်မည့် မြင်းကောင်ရေ ၂ဝဝဝ စက်ခေါင်းသစ်များကို တရုတ်ချေးငွေဖြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စက်ခေါင်းသစ် သုံးခုကို ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်ရထားလမ်းပိုင်း၌ ပြေးဆွဲ အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
လက်ရှိပြေးဆွဲနေသည့်စက် ခေါင်းများနှင့် ရထားတွဲများနေရာတွင် ခေတ်မီစက်ခေါင်းသစ်များ၊ တွဲသစ်များဖြင့် ပြေးဆွဲပေးနိုင်ရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံချေးငွေဖြင့် စက်ခေါင်းသစ် ထုတ်လုပ်တပ်ဆင် ရေးစက်ရုံ(နေပြည်တော်)တွင် တစ်နာရီကီလိုမီတာတစ်ရာနှုန်းအထိ ပြေးဆွဲနိုင်မည့် မြင်းကောင် ရေ ၂ဝဝဝ စက်ခေါင်းသစ်များကို တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်နေခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်မျိုးက ”ရန်ကုန်-မော်လ မြိုင်ရထားလမ်းပိုင်းမှာ ပြေးဆွဲနေတဲ့ ရထားတွဲနဲ့ စက်ခေါင်းတွေကို ခေတ်မီတဲ့တွဲနဲ့ စက်ခေါင်းသစ် တွေနဲ့ အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရေး ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စက်ခေါင်းသစ် ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ရေးစက်ရုံ (နေ ပြည်တော်)မှာ တစ်နာရီကီလိုမီ တာ တစ်ရာနှုန်းအထိ ပြေးဆွဲနိုင်မယ့် မြင်းကောင်ရေ ၂ဝဝဝ စက် ခေါင်းသစ်တွေကို တရုတ်နိုင်ငံချေး ငွေဖြင့် စီမံကိန်းနဲ့ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ စက်ခေါင်းသစ် ၇ ခေါင်းတပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ပြီး အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စက်ခေါင်းသစ် သုံးခေါင်းကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာ နှစ်မှာ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ပြီးစီးမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ရန်ကုန်-မော်လ မြိုင်ရထားလမ်းပိုင်းမှာ ပြေးဆွဲအသုံးပြုနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဖေဖော်ဝါ ရီ ၂ဝ ရက်က နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၅ ရက်တွင် ပြောသည်။
ယင်းအပြင် တရုတ်နိုင်ငံချေး ငွေစီမံကိန်းဖြင့်၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ခေတ်မီလေအိတ်ပါ ရိုးရိုးတွဲသစ်(၁၅)တွဲ တည် ဆောက်ရန် ဘဏ္ဍာငွေခွင့်ပြုချက် ရရှိထားပြီး တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။ ဦးကျော်မျိုးက”မြန်မာ့မီးရထားရဲ့လူစီးတွဲနဲ့ ကုန်တွဲစက်ရုံ (မြစ်ငယ်)မှာ တွဲတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ စတင်ဆောင်ရွက်ပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ပြီးစီးမယ်လို့ ခန့်မှန်းလျာထားပါတယ်”ဟုပြောသည်။ ရိုးရိုးတွဲသစ်(၁၅)တွဲတည် ဆောက်ရာတွင်(၁၅)တွဲ အနောက် (၄)တွဲကို စားသောက်တွဲများအ ဖြစ်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန် (၁၁)တွဲကို ရန်ကုန်-မော်လမြိုင် လမ်းပိုင်း၌ လွန်းပြန်ရထားအဖြစ် ပြေးဆွဲနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မင်းဘူးခရိုင် တစ်ခုတည်းတွင် ဆည်ရေခွန်ကြွေးကျန် ဆယ်နှစ်အတွင်း ကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၆ဝဝဝ ကျော်ရ
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အမျိုးသားကြန်အင် လက္ခဏာများကို ထုတ်ဖော်ပြီး နောင်မျိုးဆက်သစ်မျ?
စစ်ကိုင်းမြို့၌ ကျင်းပသည့် ပထမအကြိမ်ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်နှင့် ကျောက်စိမ်းအတွဲများရောင်းချပွဲတွင် ကျောက်စိမ်းအတွဲပေါင်း ၂၁၀ဝ ကျော်ခင်းကျင်းပြသ
မြေပဲဆန်ကုန်ကြမ်းဈေးမြင့်တက်လာပြီးနောက် မြေပဲဆီဈေးနှုန်းပါ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် တောင်သူများ တန်ဖိုးနည်းဆီများကိုသာ ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရ
လျှပ်စစ်မီတာခကောက်ခံရေးလုပ်ငန်းကို မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့် ဖြူးရေးဌာနမှ ပြန်လည်ကော??
ခရီးသည် ၁၃၆ ဦး လိုက်ပါလာသော ဘိုးရင်း- ၇၃၇ လေယာဉ် ဖလော်ရီဒါတွင်မြစ်ထဲ ထိုးကျ
နည်းပညာနှင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ကျောင်းခေါ်ကြိမ်များကိ
ရော့ဒေးလ်နှင့်ပွဲတွင် တိုက်စစ်မှူးဟယ်ရီကိန်း ပါဝင်ကစားရန်မသေချာ ၊ ပြိုင်ဘက်ကွင်းအပေါ်ဝေဖ??
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟောင်း တရားရုံးသို့ မလာရောက်နိုင်ကြောင်း လျှောက်ထားချက် ပယ်ချခံရ
မြင့်မြတ်၊ နေနော်၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်၊ ခင်လှိုင်တို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ”ကောလိပ်ဂျပိုး”ရုပ?
‘ဂျင်းကောင်’ ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရုံတင်ပြသ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်က လိမ်လည်မှုတွေ ကာကွယ်ဖို့လိုပြီ
ကာရင်တန်လေ့ကျင့်ရေးကွင်း အပြင်ဘက်တွင် ပေါ့ဘာထွက်သွားရန် တောင်းဆိုမှုဖြစ်ပွား